ေဗဒင္ – A Phaw Mon
3.9.2020 မှ 9.9.2020 အထိ (၇) ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း.(ရုပ်သံ)
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းအတိုက်အခံအခက်အခဲအချို့ရှိနေသော်လည်း ကံကောင်းကြီပွားတိုးတတ်မှုမြား ရယူပိုငျ ဆိုငျ ခှငျ့ရ မညျ။ စီးပှားရှာဖှမှေု၌ အခှငျ့အရေးကောငျးမြား ရရှိပါလိမျ့မညျ။ မထငျမှတျဘဲ ငှကွေေးအမြားအပွား ရရှိ တတျပွီး လုပျငနျးတှငျ …
(၇)ရက်သားသမီးမျာ အားလုံး (၉)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက် ဒီလထဲတွင်ကြုံတွေ့နေရသော ပြသနာများအားချုပ်ကိုင်အနိုင်ယူစွမ်းရှိသောကာလဖြစ်သည်။မိမိလုပ်ဆောင်သမျှကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးမလိုက်လံကူညီတက်သည် ။ စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ် သက်ပြီး လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား …
တစ်ပါတ်စာ (၇)ရက် သားသမီးဟောစာတမ်း (27.8.2020 မှ 2.9.2020 အထိ)
တနဂၤေႏြ ယခုကာလအတွင်း လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းမှ အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် သင့်သည်။ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအလုပ်ကို အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်းပြောင်းပြီးလုပ်ပါ။ ပြည်ပနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများလည်း ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်းများ …
တစ်ပါတ်စာအထူးဗေဒင်ဟောစာတမ်းဗေဒင် (26.8.2020) မှ (1.9.2020) ထိ
တစ်ပါတ်စာအထူးဟောစာတမ်းဗေဒင်ဆရာကအညံ့တွေမြင်ရင်ပြောပေးမှာပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်သိရတာပေါ့သိပ်ညံ့နေတယ်ဆိုလည်းယတြာလေးတွေပြုလုပ်လိုက်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်…..မိတ်ဆွေများအထူးကံကောင်ကြပါစေ..ဆရာအောင်ချစ်မင်း။ တနင်္ဂနွေ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းလုပ်ငန်းသစ်စခြင်း၊အလုပ်နေရာအပြောင်းလဲခြင်း၊အခြေနေတွေပြောင်းလဲခြင်းတွေအလွန်ကောင်းပါသည်။ပြည်တွင်ပြည်ပခရီးတွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ထွက်နေတဲ့ငွေကြေးတွေလည်းပြန်ဝင်လာလိမ့်မည်။ကွဲကွာနေတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနှင့်ပြန်ဆုံရမည်။သွတ်သံသစ်နှင့်အသီးအနှံလုပ်ငန်းတွေအထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ခရီးသွာလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ငွေကြေးကအဝင်များသလိုအထွက်လည်များပါလိမ့်မည်။ ဘာမဆိုအထစ်အငေါ့လေးတွေကြုံတွေ့ရပြီးမှအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်ပါသည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်စိတ်ပူပင်ရတတ်သည်။ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးစိတ်မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝမ်းဗိုက်၊ဦးခေါင်းရောဂါတွေဂရုစိုက်ပါအနည်းငယ်ညံ့နေမည်။သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအဖြူရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၄၆အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။အိမ်ဘုရားတွင်ရွက်လှ(၄)ညွန့်သပြေ(၆)ညွန်လှူပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုံပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ …
တစ်ပတ် စာ ခုနှစ် ရက် သားသမီး ကံကြမ္မာ ဟောကိန်း (24-8-2020 to 30-8-2020)
တစ်ပတ် စာ ခုနှစ် ရက် သားသမီး ကံကြမ္မာ ဟောကိန်း (24-8-2020 to 30-8-2020) တနင်္ဂနွေ သားသမီး အစားမှား ဆေးမှားတတ်သောကာလပါ မည်သည့် …
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၂၃ .၈ . ၂၀) မှ (၂၉.၈ .၂၀ ) ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၂၃ .၈ . ၂၀) မှ (၂၉.၈ .၂၀ ) ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. …
သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတ / ေဗဒင္
နှလုံး လမ်းကြောင်း ကပြောတဲ့ အချစ်ရေးနဲ့အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း ကို မျှဝေလိုက် ပါတယ်နော် …
နှလုံးလမ်းကြောင်းက ပြောတဲ့ အချစ်ရေး… လက်ဖဝါးကိုကြည့် လိုက်ရင် လက္ခဏာ လေးတွေ ရှုပ်ထွေးနေ တာတွေ့ရပြီး လက္ခဏာ ဆရာတွေ ကတော့ အချစ်ရေး ဘဝနဲ့ အလုပ် …
တစ်ပတ်စာ (၇) ရက်သားသမီးများ ဟော စာတမ်း (20.8.2020 မှ 26.8.2020) အထိ
တနင်္ဂေနြ ယခုကာလအတွင်း အလုပ်နေရာ သစ် ပြောင်းခြင်း၊ ဋ္ဌာနပြောင်းခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းချင်နေသောမြေကွက်ရောင်းထွက်ရခြင်းမျိုးလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ အလှူကြီး၊ အတန်းကြီးများကို ရေစက် …
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက် သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (17-8-2020 TO 23-8-2020)
တနင်္ဂေနြ သားသမီး ထူးခြားသော အိပ်မက် ကောင်းများ မြင်မက်ပါလိမ့်မည် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများနှင့်လည်း အပြင်တွင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မည် တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းများတန်ဖိုးမဖြတ်နိူင်သော လမ်းညွှန်စကားများလည်းကြားရပါလိမ့်မည် မိမိရဲ့အနစ်နာခံကြိုးစားမူများ အတွက် ကံကောင်းမူရလာဒ်ကောင်းများ ရရှိပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးတွင်ခါးနာခြင်းခါးအောင့်ခြင်းခံစားရပါမည် …
ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ( ၁၆.၈.၂၀၂၀ မှ ၂၃.၈.၂၀၂၀ အထိ )
ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ( ၁၆.၈.၂၀၂၀ မှ ၂၃.၈.၂၀၂၀ အထိ ) မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ (၁၆)ရက်မှ ၊ (၂၃)ရက်အတွင်း . ဆောင်ရန် …